अब काठमाडौंका गल्लीमा निस्किए पनि पक्राउ पर्ने, बेलुकी ८ बजे देखि बिहान ६ बजे भित्र मात्र हिँड्न पाइने !!पुरा पढ्नुहोस !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/अब काठमाडौंका गल्लीमा निस्किए पनि पक्राउ पर्ने, बेलुकी ८ बजे देखि बिहान ६ बजे भित्र मात्र हिँड्न पाइने !!पुरा पढ्नुहोस !!
अब काठमाडौंका गल्लीमा निस्किए पनि पक्राउ पर्ने, बेलुकी ८ बजे देखि बिहान ६ बजे भित्र मात्र हिँड्न पाइने !!पुरा पढ्नुहोस !!
उपत्यकामा कोरोना संक्र`मितको सं`ख्या बढि रहँदा जिल्ला प्रशा`सन कार्यालय, काठ`माडौंले लकडाउन कार्या न्वयमा थप कडाइ गर्ने नीति अख्ति`यार गरेको छ । प्रशासनले अब विभिन्न ब`हानामा भित्री सडक तथा गल्लीमा निस्किने व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रलायबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार, शुक्र`बार दिउँसो बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले मानिसको अना`वश्यक भी`ड निय`न्त्रण गर्न यो नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि काठमाडौंका मूल सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रहरी लकडाउन कार्यान्वयमा खटिएको थियो ।
प्रशा`सनले यसअघि जारी भएका सबै ई–पास र पहेँलो रङको पास पनि खारेज भएको बताएको छ । अब जारी हुने पास नीलो रङ`को हुने भनिएको छ । प्रशा`सनले अत्या`वश्यक अवस्थामा हिँड्ने गह्रौं सवारी साधन`लाई बेलुकी ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेभित्र मात्र हिँड्न दिने पनि भनेको छ ।
एम्बुलेन्स, शव बाहन, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, सबै खाद्य वस्तु, तरकारी तथा फल`फूल लगायतका सामग्री बोकिएका गाडीले भने बिना पास नै आवागमन गर्न पाउनेछन् ।